बिहे गरेको ३३ वर्षपछि जुम्ल्याहा दाजुबहिनी भएको थाहा पाएपछि.. यस्तो भयो – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/बिहे गरेको ३३ वर्षपछि जुम्ल्याहा दाजुबहिनी भएको थाहा पाएपछि.. यस्तो भयो
बिहे गरेको ३३ वर्षपछि जुम्ल्याहा दाजुबहिनी भएको थाहा पाएपछि.. यस्तो भयो
एजेन्सी । विवाह बन्धनलाई सबैभन्दा पवित्र बन्धन मानिन्छ । विवाहमा दुलाहा-दुलही एक अर्काको साथमा सात जन्मसँगै हुने कसम खाने गर्छन् । तर अमेरिकामा आफ्नै भाई-बहिनीकोबीचमा विवाह भएको छ । यो घटना अमेरिकाको वाशिंगटनमा भएको हो । जहाँ एक विवाहित जोडी विवाह भएको ३३ वर्षपछि दाजुबहिनी भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । उनीहरु विवाह भएको ३३ वर्षसम्म पनि छोरा-छोरी नभएपछि सन्तानको चाहानामा एउटा क्लिनिकमा गए ।
डाक्टरले उनीहरुको बच्चा नभएको कारणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा ल्याब असिस्टेन्टमा धेरै समानता भएको कारण उनीहरुको नाता श्रीमान-श्रीमती भन्दा अगाडि पनि झनै निकट सम्बन्ध भएको बताए । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरु आफ्नै दाजु-बहिनी भएको कुरा पत्ता लागेको हो । उनीहरु जुम्ल्याहा सन्तानको रुपमा एउटै आमाबाट जन्मिएका थिए । जब डाक्टरले उनीहरुको जन्ममिति हेरे तब उनीहरु सन् १९८४ मा जुम्ल्याहा सन्तानको रुपमा जन्मिएको पत्ता लागेको हो ।
जब डाक्टले यो कुरा उनीहरुलाई बताए तब उनीहरु विश्वास नलागेर जोडले हाँस्न थाले । उनीहरुलाई पहिला पनि साथीहरुले उनीहरुको जन्ममिति एउटै भएको र अनुहार पनि एउटै भएको कारण शंका गरेका थिए । तर उनीहरुले साथीहरुको कुरामा पनि विश्वास नलागेर संयोगमात्र भएको बताएका थिए । उनीहरुका आमाबुबाको एक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । अभिभावकको मृत्यु भएपछि उनीहरुलाई राज्यले रेखदेख गरेको थियो । राज्यले हुर्काएका कारण उनीहरु एक आपसमा कसैलाई नचिनेर विवाह गर्न पुगेका थिए ।
‘फोटो फिरिममा -२’ हेरेपछि शिशिर भण्डारीकी श्रीमतीले आँखामा आँशु भनिन् , बुढो..के गरेको यस्तो ? (भिडियो सहित)
कोरोनाबाट भन्दा बाढीपहिरोबाट दोब्बर बढीको मृत्यु
यस्ताे छ पाथीभरा देवी मन्दिर इलामकाे महिमा ! सेयर गर्नुहाेस् पुरा हुनेछ हर मनाेकामना…
प्रेरणाको श्रोत पहिलो सन्तान छोरासँग रमाउँदै रूपा कृष्ण (फोटो फिचर)